Sidee inuu ka soo kabsado Files Lost in la gooyaa oo paste
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Files Lost in la gooyaa oo paste
Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray Files ka dib markii Goosashada iyo dhajinta Folder?
Hello, waxaan u baahan tahay caawimo ku saabsan arrinta soo kabashada, Jinka dhimo. Waxaan wareejiyo gal ah, taas oo ka kooban 2GB qiimaheedu images (jaraa, ilmaha wiilkayga), si ay u flash drive USB by Goosashada iyo dhajinta. Nasiib darro flash aan drive waxaa dhawaan burburay oo aan dhan photos aan laga badiyay. Ma jiraa software / hab kasta oo aan isku dayi kartaa inuu ka soo kabsado photos aan?
Users Qaar badan oo ka fiirsan in ay file weligiis badiyay doonaa ka dib markii Goosashada iyo dhajinta howlgalka. Laakiin tani ma aha run ahaantii mid run ah. Marka files waa la jaray iyo dhejiyo ka drive, loo aqoonsado doonaa sida xogta geli karin oo sugi la overwritten by files oo cusub ku drive. Weli waxaad leedahay fursad si ay u soo ceshano la barnaamij gaar ah koollada cut soo kabashada.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican in kabsado jaray xogta Jinka in hab sahlan oo lagu kalsoonaan karo. Waa in la soo celiyo dhammaan noocyada file caadi ah ku waayay cut iyo Jinka, oo ay ku jiraan images, videos, files audio, waraaqaha, iwm qalab ayaa si buuxda u Windows computer iyo Mac, iyo sidoo kale qalabka lagu kaydiyo sida kaadhka xusuusta, flash drive iyo dibadda awoodin adag drive.
Sida ay adag tahay in la sheego in files laga badiyay ka dib markii Goosashada iyo dhajinta la soo kabsaday karaa ama ma, barnaamijkan oo awood badan ku siinayaa version a free maxkamad si scan qalab aad ka hor soo kabashada. Waxaad kartaa hoos ku soo bixi version maxkamadda inuu ka soo kabsado xogta Jinka cut hadda!
Faylal ay ka bogsanayaan Lost in la gooyaa oo dhaji in 3 Talaabooyinka
Waxaan adkayn doonaa dib u soo kabashada, Jinka cut la Wondershare Data Recovery for Windows. Haddii aad qabto Mac ah, waxaad soo kaban karto xogta Jinka cut la version Mac ee talaabooyin la mid ah.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabasho inuu ka soo kabsado files lumay ka dib markii Goosashada iyo dhajinta folder
Sida image ku soo bandhigay hoos ku qoran, aynu dooro "lumay Recovery File" mode inuu ka soo kabsado xogta Jinka gooyay ka dib markii ay barnaamijka.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in la soo celiyo files Jinka cut ka your computer, fadlan ha soo dajiyo barnaamij ku saabsan xijaab / la wado halkaas oo files ku yaalla laga badiyay.
Tallaabada 2 xijaab Scan / kaxayn raadiyo cut iyo Jinka files
Halkan waxaad ka dooran kartaa xijaab / drive meesha faylasha aad ka xanaaqeen oo dhejiyo ka oo guji "bilow" button aad u bilaabayso raadinta files.
Fiiro gaar ah: Haddii files ka xanaaqeen oo dhejiyo ka qalab lagu kaydiyo dibadda, waxaad u baahan tahay in lagu xiro qalab si aad u computer.
Tallaabada 3 Ladnaansho files lumay ee cut iyo Jinka
Marka iskaanka ay ka badan tahay, waxaad ka arki kartaa magacyada file helay oo ku eegaan qaabab file qaar ka mid ah sida sawirada si loo hubiyo in xogta la dhimo iyo Jinka la kama uusan soo kabsan karaan ama.
Haddii ay ogaan, waxaad iyaga dooran kartaa oo guji "Ladnaansho" si ay u badbaadin kale xijaab / drive on your computer.
Sida loo kaabta macruufka 9 ilaa Mac
HP Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Computer HP